Karọt "Nantes": nkọwa dị iche iche, ịkọ ihe, foto - Karọt iche - 2019
Karọt "Nantes": nkọwa, ịkụ na nlekọta
Karọt "Nantes" - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nna ochie dị afọ 80, bụ onye gosipụtara onwe ya na mpaghara nke mbụ Soviet Union. Ihe dị iche iche nwetara site na ndị na-azụlite Soviet na 40 nke narị afọ gara aga. A kụrụ carrot a n'ebe ndịda nke Krasnodar na akwa nke obodo Irkutsk - na ebe ọ bụla ọ na-amasị ndị na-elekọta ubi na-enwe mkpụrụ na-aga n'ihu. Ọ ga-amasị m ileba anya na usoro dum nke na-eto eto carrots "Nantes", na-amalite site na ịgha mkpụrụ na-agwụcha na owuwe ihe ubi.
Ịkụ mkpụrụ na-eto eto
Ọrịa na pests
Nkọwa na njirimara nke iche iche
"Nantes" bụ ụdị ọdịdị nke carrots. Aha ya adịwo anya ghọọ aha ụlọ iji kọwaa ọtụtụ ndị ọzọ carrots: ọdịdị na mkpụrụ nke mmalite na nke etiti oge iche. Ọ bụrụ na ha na-ekwu maka karọt, nke yiri "Nantes", mgbe ahụ ọ na-edozi ozugbo na nke a bụ oroma, elongated, ọbụna mkpụrụ osisi mgbọrọgwụ nke ọdịdị na-ebugharị ya na ngwugwu.
Ị ma? Osimiri karọt bụ onye obodo Afghanistan. N'ebe ahụ, ọ bụ mgbọrọgwụ na-acha odo odo (odo odo, ọcha ma ọ bụ odo). Ndị ọkà mmụta sayensị nke Netherlands si na nchịkọta ndị a na-ahọrọ ugbu a. Ihe osise ya na-egosi Royal Oranian Dynasty nke Netherlands, onye dynastic agba bụ oroma.
Njirimara nke carrots:
mgbọrọgwụ osisi na-acha uhie uhie;
udi nkpuchi dika ihe di nma;
arọ 100-160 g, ogologo 13-15 cm;
mmalite ma ọ bụ ọkara n'oge.
Karọt "Nantes", dị ka akọwara ya na ụdị dịgasị iche iche, bụ mmalite akwukwo nri. Ma n'otu oge ahụ, a pụrụ ịkọwa ya na mbido nke mbụ. Kedu otu a? Na-ekpe ikpe site na mmeputa nke ngwaahịa mbụ ahụ, ụdị dịgasị iche iche na-achazi acha, ebe ọ bụ na ọ na-ewe 50-55 ụbọchị site na akpa ebubo karọt ruo nsị mbụ nke azụmahịa. Ma nkọwa zuru oke nke "Nantes" na-abịa na 90-120 ụbọchị.
Nke a na-enye ohere ka osisi ahụ kwuo na ihe dị iche iche n'oge.
Nri nke mgbọrọgwụ a dịgasị iche iche bụ ntinye aka nri nke carrots na-agbanwe, anụ ahụ dị ụtọ. Enwere ike ịchekwa akwụkwọ nri maka ogologo oge mgbe ịtọba na okpuru ulo (maka nchekwa oyi).
Soro onwe gị na ndị nnọchianya ndị dị otú ahụ dị ka carrots, "Samson", "Shantase 2461".
Otu n'ime ihe ndị na-adịghị mma nke ihe ọkụkụ na-akpata bụ na ezi owuwe ihe ubi nke mkpụrụ osisi dị iche iche nke ụdị dịgasị iche iche nwere ike nweta naanị na ala ndị na-eme nri ma na-emepụta.
A na-eji karọt "Nantes" mee ihe:
maka isi nri na borscht;
maka dị iche iche salads na marinades;
maka ịme ihe ọṅụṅụ na nri nwa.
Carrots na-eto nke ọma na ebe anwụ na-acha. Ọ bụrụ na ị kụrụ carrots na ndò ma ọ bụ ndochi anya - seedlings ga-elongated, icha mmirimmiri, na mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ agaghị enweta ezigbo ibu.
Ị ma? Carrots gụnyere na nri nwere ezigbo utịp na ọbara: lowers cholesterol ma mee ka calcium ọdịnaya. Ọ bara uru karịsịa maka ndị nwere ọrịa obi ha. Carotene dị na carrots nwere mmetụta bara uru n'ahụ mmiri anya. Nri carrots ga-eri kwa ụbọchị ga-enyere ahu aru iji nagide nsogbu ndi mmadu na-aruta n'ime obi na ihe ndi obara.
Tupu ịgha mkpụrụ carrots, onye na-elekọta ubi kwesịrị ịtụle ihe osisi na-eto n'elu akwa a n'oge ikpeazụ.
Enweghị ike ịkwụrụ karọt ruo ọtụtụ afọ n'otu ebe ahụ.
Ikwenye na nhazi ihe ubi ga-enye gị ohere inweta ezi owuwe ihe ubi nke carrots.
Carrots na-eto eto mgbe ndị dị otú ahụ gara aga:
parsnip na dil;
pasili na celery.
N'otu oge ahụ, karọt nwere mmetụta dị ukwuu na akwa, ebe o toro tupu:
tomato na kabeeji;
garlic na eyịm;
cucumbers na poteto.
Ebe ọ bụ na ụdị dịgasị iche iche dị ngwa ngwa, ọ nwere ike akụ ya ugboro abụọ. A na-ebute mkpụrụ osisi carrots n'oge opupu ihe ubi (na njedebe nke March ma ọ bụ na mbido April).
Ị ma? Ọ bụrụ na mmadụ eri ọtụtụ carrots, akpụkpọ ahụ ya ga-agbanwe ma dị nso na oroma. N'ịmara nke a nke mgbọrọgwụ ahụ, ndị ọrụ nke zoos na-enye nnukwu ọnụ ọgụgụ carrots na pink flamingos, nke na-ahapụ ụmụ nnụnụ ka ha na-enwe àgwà dị iche iche nke feathers. N'etiti umu udiri umu ahihia umu anu nwere umu uhie na uzo. Ka ụcha wee bụrụ nke na-egbuke egbuke ma na-adịgide adịgide, a na-etinye carrots na grated nri (10-15 g)
E nwere ike ịgha mkpụrụ nke abụọ na ọkara nke abụọ nke ọnwa July, ihe ọkụkụ ahụ ga-amalitekwa tupu mmalite nke ntu oyi.
Iji nweta oge opupu ihe ubi n'oge owuwe ihe ubi, carrots "Nantes" nwere ike kụọ tupu oyi:
na November, họrọ ikuku mmiri ma dozie akwa n'okpuru karọt;
ala na-atọghe, akara a na-ere maka ịgha mkpụrụ na akara;
karọt osisi ejikọtara na ájá (1: 1) na-akụ na-akụ n'ala ma na-ekpuchi ya.
Nlekọta n 'oghe oghere maka akuku carrots "Nantes" n'oge oyi bu nani na agrofibre ebe nchekwa na "uwe onu."
Ozugbo akpa osisi karọt pụtara na mmiri na ubi - a wara wara wara.
Nke a ga-enye ikuku oxygen na mgbọrọgwụ nke seedlings ma hichaa oghere ndị sitere na obere ata ahịrị. Akuru carrot podzimnaya ripasịrị site na njedebe nke May. Tupu ịgha mkpụrụ nke karọt n'ala, ọ dị gị mkpa iji calibrate ha. Iji mee nke a, a na-emenye mkpụrụ ahụ n'ime mmiri na mmiri ọkụ ma hapụ ha na mmiri mmiri n'otu ntabi anya.
Na ụtụtụ, lelee ikike: mkpụrụ osisi efu niile na-adịghị agwụ agwụ ga-efegharị n'elu, osisi ndị kwesịrị ekwesị maka ịgha mkpụrụ ga-edina na ala.
Jiri nwayọọ ma jiri nwayọọ nwayọọ gbanye akpa ahụ - n'ime usoro a na-agba mmiri na mkpụrụ osisi efu na-ese n'elu n'elu. Na njedebe nke usoro ahụ, naanị mkpụrụ osisi a na-etinye n'ọnọdụ dị na ala nke tank.
Mụta ihe banyere ịkụ mkpụrụ nke mgbọrọgwụ ndị dị otú ahụ dị ka ihe oriri, rutabaga, tonip, Jerusalemichochok, radish ojii, yabasị seedlings, beets sugar.
Ná ngwụsị nke mkpụrụ ịlele ị nwere ike ime n'ụzọ abụọ:
Ụzọ nke mbụ bụ ịtọ osisi a nwalere ka ọ bụrụ ebe ọ dị mfe ịgha mkpụrụ ma kụrụ ya n'oge na-enye onye na-elekọta ubi.
Ụzọ nke abụọ bụ iji obere ákwà nhicha si na anụ ọ bụla, ehicha ya, dozie ya ma tinye ya na efere efere. Mgbe ị na-egwu mmiri, wụsa mkpụrụ osisi ahụ, bụ nke ka na-ata mmiri mgbe echisịrị ya, jigharị akwa, gbatị ya akwa ma kesaa ya na oyi akwa. Ihe mejupụtara efere ahụ, akwa akwa na osisi ndị etinye n'ime nnukwu plastic plastic. E kwesịrị ijikọta ngwongwo ahụ ka ị na-edebe ya mmiri, ma debe ya na ebe ọkụ (na kichin kichin ma ọ bụ na mmiri ọkụ ọkụ) maka ụbọchị 3. Mgbe oge a gasịrị, a ga-enyocha ngwugwu kwa ụbọchị. Ozugbo ọ dịkarịa ala 1/3 nke mkpokọta osisi fatịlaịza mmiri, obere carrots (1-2 mm) na-apụta, a na-ewepu mkpụrụ ahụ n'akpa ahụ ma tinye ya na mpempe akwụkwọ akụkọ akọrọ iji kpoo. A ghaghị akụ mkpụrụ dị otú ahụ n'ala n'echi ya. Ebe ọ bụ na osisi karọt dị obere, tupu ịgha mkpụrụ, ha ga-ejikọta ya na ihe ọ bụla (ájá, ahịhịa).
A na-akụ ụfọdụ ndị na-elekọta ubi ndị nwere osisi karọt site na ịsa mmiri: tinye ha na ketụ, wunye mmiri ruo n'elu kịtị ahụ ma kụọ carrots n'akụkụ ebe a, na-ekpuchi mmiri na mgbakwunye mkpụrụ sitere na nkwụnye.
Ị ma? Na America, a na-eme ememe Karọl kwa afọ. Ebe mgbakọ bụ obere obodo nke Holtville, California. Ihe mgbaàmà na mmalite nke ememme ahụ bụ nhoputa nke "eze nwanyị karọt". Obodo ahụ na-agba izu ahụ dum: a na-eme ka carrots chọọ ya na carrots na wiil ndị ahụ gburugburu n'okporo ámá, ndị na-esi nri na-ahazi asọmpi maka efere karọt kasị mma, asọmpi maka ịdị anya na nzi ezi nke nkedo site na akwụkwọ nri mgbọrọgwụ.
Ihe kacha omimi nke seeding n'ime ala bụ 2-3 cm.
Aisles nke karọt kwesịrị ịdịkarịa 15-20 cm n'obosara (kacha mma maka obosara chopper).
Dị ka e kwuru n'elu, iji nweta obere carrots ("bundle production"), a na-akụ ya tupu oyi.
Usoro a dị ize ndụ n'ihi na ọ bụrụ na onye na-elekọta ubi na-eme atụmatụ oge ịgha mkpụrụ na-ezighị ezi na tupu mmalite nke igwe oyi na-atụ oyi, karọt nwere oge ịrịgo ma rịgoo, mgbe ahụ, ome ahụ ga-anwụ na ntu oyi mbụ. Mkpụrụ osisi ndị dina n'ala anaghị enweta ntu oyi ma ọlị, ma ozugbo mmiri bịara, ha ga-epulite.
N'oge opupu ihe ubi, oge ụfọdụ na-atụkarị oyi na-atụkarị, nke nwere ike ịgụta ọtụtụ ụbọchị ruo otu izu. Mkpụrụ osisi karọt a na-atụ egwu adịghị atụ egwu ihu igwe oyi, ihe bụ isi bụ na okpomọkụ adịghị ada n'okpuru efu. Ma ọ nwere ike imetụta ọdịdị nke mgbọrọgwụ n'ọdịnihu.
Cold na-eme ka eziokwu ahụ bụ na osisi anaghị ewulite ezigbo mgbọrọgwụ, mana "na-aga àkụ", ya bụ, ọ na-amalite ịmalite ịmalite nche anwụ. A gaghị eche mgbọrọgwụ dị otú ahụ n'oge oyi, ọ bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị maka ihe oriri, anụ ọkụkụ na nkụ ("osisi").
Nkpọrọgwụ kụrụ mkpa nhazi usoro wepụtara n'etiti ahịrị. Nwapu n'etiti ọgwụgwọ ala kwesịrị ịbụ ihe karịrị ụbọchị 10-14. Weeding omume na kụrụ dị ka "okpukpu kporo" - mgbọrọgwụ agaghị eto gbagọrọ agbagọ (na karọt na-eto eto na ala siri ike) na ga-enyere na-edebe akwa carrot dị ọcha.
Mgbe ịdị elu nke "ọdụ" nke dị n'elu ala ruru 15-20 cm, ọ dị mkpa ịkụghasị ihe ndị a kụrụ. Mkpụrụ osisi na-amị mkpụrụ, na-adọpụpụta ihe niile sitere n'ubi. N'etiti carrots na-ahapụ ebe dị anya nke 3-4 cm Usoro a ga-ekwe ka mgbọrọgwụ ndị ọzọ na-eto eto buru ibu, mara mma na tọrọ ụtọ.
Ịgbara dị ezigbo mkpa maka carrots na ọnwa mbụ mgbe germination. N'oge a, ọ dị mkpa mmiri otu ugboro n'izu, ọ dịkarịa ala 10 lita mmiri ga-eji na mita ọ bụla. Ọ bụrụ na ihu igwe na-ekpo ọkụ, mgbe ahụ na-enweghị ịgbara mmiri, ndị na-eto eto na-adọrọ mmasị nwere ike ịnwụ ma nwụọ.
N'ọdịnihu, a ga-ebelata ndị okenye na-eto eto ma mee ka ha ṅụọ mmiri ugboro abụọ n'ọnwa.
Na usoro nke uto, karọt ga-eji nri ịnweta nri ugboro abụọ:
a na-ebu nri mbụ na ogbo 4 nke akwụkwọ ndị a;
A na-enye nri nke abụọ na mbubreyo July.
Maka fertilizing, a na-ejikọta nri ndị na-ebu ịnweta site na mmiri ndị a: 25 g nke superphosphate + 15 g nke potassium nnu + 10 g nke urea.
Ọ dị mkpa! E kwesịghị ịkụkwa Carrots n'ala, nke a na-amịpụta na ọ dị ọhụrụ, ọ bụghị anụ ehi na-agbagharị tupu ọ na-akọ ihe. Ntuba nke nitrogen na ala ga-eme ka omekota nke karọt (ọdịdị nke "mpi" carrots).
A ghaghị ịkọkọta ọnụ ọgụgụ fatịlaịza zuru ezu dabere n'eziokwu ahụ bụ na a na-etinye ego fatịlaịza e nyere n'elu n'elu 1 sq. Km. akwa akwa.
Iji chebe onwe ya pụọ ​​na ụmụ ahụhụ, na-ebugharị osisi na akwukwo na ụmụ ahụhụ ("Karate", "Arrivo").
A na-akpọkwa ụmụ ahụhụ dịka "Enzio", "Marshal", "Tanrek", "Mospilan", "Fastak", "Vertimek", "Lepidotsid", "Kemifos", "Akarin".
A na-emegharị spraying na nkebi:
a na-emezi ọgwụ mbụ na ogbo 4 nke akwụkwọ ndị a;
nke abụọ - 21 ụbọchị mgbe mbụ;
nke ugboro atọ ha na-emeso akwa ahụ naanị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, mana ọ bụghị tupu ụbọchị iri abụọ na abụọ mgbe emesiri ya.
N'iji nlezianya dị ọcha
Maka nchebe nke ihe ubi, ndị na-elekọta ubi na-emepụta ihe ndị a kụrụ n'ubi na ọgwụ ndị mmadụ. Otu ngwá ọrụ dị irè na ọgụ a bụ nsị nke wormwood.
Esi ewepu wormwood:
5-liter tank jupụtara freshly wormwood;
wunye esi mmiri wormwood na nsọtụ nke akpa;
mechie mkpuchi ma pụọ ​​n'otu ntabi anya ka ị sie ike;
ke usenubọk utọ infusion site gauzed gauze;
itughari 10 lita mmiri.
Na infusion dị njikere maka ojiji. Ọ bụrụ na mgbe ọgwụgwọ nke karọt kụrụ na e nwere njuputa nke infusion, ha nwere ike ịgba currant, utu ma ọ bụ goozberị bushes si aphids.
Ọ dị mkpa! Ndị na-akọ ubi na-achọpụta na uru ọ bụla nke eyịm ye carrots na-eto eto n'otu akwa. Egwu ndị na-eri nri na-echebe karọt site na efere efere, ma karọt na-echebekwa osisi sika site na yabasị. Osisi kachasị mma nke ndị a na-akụ na otu akwa - site n'usoro.
Karọt na-arịa ọrịa na-enweghị ụfụ, ọrịa ndị kachasịsị na mgbọrọgwụ a - alternarioz ma ọ bụ ụdị. Iji belata mmebi nke akwa ahụ site na ọrịa ndị a, ọ dị mkpa iji mepụta ọgwụgwọ nke akụkụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke ihe ubi na ihe ngwọta 1% nke Bordeaux liquids. Ihe kachasị emebi mgbọrọgwụ sitere na ahụhụ dị ka ụgbọ efere. Ele anya, ọnụnọ ya na akwa nwere ike ịchọta ya site na ya.
Ihe ngbochi na agha megide carrot fly bụ oge loosening n'etiti ahịrị, ọ bụghị thickened akuku na ata.
Ọ bụrụ na a gaghị egbochi mwakpo nke pests ka usoro mgbochi gbochie, a ga-emeso akwa ahụ dị ka mpempe akwụkwọ ahụ na ọgwụ chemical (Intavir ma ọ bụ Actellic).
Kroti kachasị mma ma dị mma bụ nke aka gị na-eto, na-enweghị itinye fatịlaịza mmiri na ala na nhazi na ụmụ ahụhụ. Ọ bụ nke a na-egbuke egbuke mgbọrọgwụ edo edo bụ nke na-adịghị njọ inye obere nwatakịrị - ihe nro dị ụtọ ma dị ụtọ ga-abara nwa ahụ uru.
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ndụmọdụ anyị ga-enyere ndị na-elekọta ụlọ na ndị na-elekọta ubi aka na-eto eto carrots nke "Nantes" dịgasị iche iche.
Kedu ka esi tufuo slugs na kabeeji, ose na akwụkwọ nri ndị ọzọ, yana tomato?
Otu esi eme ka orchid oge ntoju
Olee otú iji na-emeso ọrịa nke cloves
Mbube nke nsen anụ ọhịa n'ime ụlọ incubator
Mkpebi nke oge ịchụ nta na oke bekee
Otu n'ime ihe kachasị mma na nke kachasị mma nke ficus Benjamin - "De Gantel"
Anyị na-aghọta ihe dị iche n'etiti Chinese kabeeji na Peking, iceberg letus. Ha dị mma karịa ọcha anyị?
Atụmatụ na-elekọta ndị mmadụ na-aga n'ụlọ
Ọchịchị nwa currant "Ezigbo ebi"
Kedu ụdị eferot ndị kachasị mma maka nchekwa ogologo oge maka oyi? Ịhọrọ na owuwe ihe ubi nri
Ezi nri maka nri nri: ihe nuances dị mkpa ole na ole
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Karọt "Nantes": nkọwa, ịkụ na nlekọta